ရန်ကုန်တိုင်းရှိ လိုင်စင်ရရေသန့်လုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးရာတွင် ထက်ဝက်ခန့်ကိုပိတ်ရန်ညွှန်ကြားထားရ - ThutaSone
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ လိုင်စင်ရရေသန့်လုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးရာတွင် ထက်ဝက်ခန့်ကိုပိတ်ရန်ညွှန်ကြားထားရ
February 15, 2020 ThutaSone သတငျးစုံ 0
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လိုင်စင်ရရေသန့်လုပ်ငန်းများအားစစ်ဆေးရာတွင် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်မညီသောကြောင့် လုပ်ငန်းထက်ဝက်ခန့်ကိုပိတ်ရန် ညွှန်ကြားထားရကြောင်း အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(FDA)မှ သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိရေသန့်လုပ်ငန်းများကို တစ်လတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရာတွင် ယခုကဲ့သို့တွေ့ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။“စစ်ဆေးမှုကတစ်လကိုတစ်ကြိမ်လုပ်ပါတယ်။ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကိုက်ညီအောင်ထုတ်လုပ်မှုမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ပိတ်သိမ်းဖို့ကိုညွှန်ကြားပါတယ်။ ဒီလိုစစ်ဆေးရာမှာလိုင်စင်ရအနေနဲ့ပြောရရင် လိုင်စင်ရထားပြီးသားအားလုံးရဲ့ ထက်ဝက်ခန့်ကိုပိတ်ဖို့ညွှန်ကြားနေရပါတယ်။”ဟု အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ဌာနခွဲမှညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမင်းဝံက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လိုင်စင်ရရေသန့်လုပ်ငန်းမှာ (၃၀၀)မှ (၅၀၀)ကြားရှိကြောင်း သိရသည်။အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဦးစီးဌာန (FDA)အနေဖြင့် ရေသန့်လုပ်ငန်းများအား ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားအရကြာမြင့်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာအရသိရသည်။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးရှိ လိုငျစငျရရသေနျ့လုပျငနျးမြားအားစဈဆေးရာတှငျ စံခြိနျစံညှနျးနှငျ့မညီသောကွောငျ့ လုပျငနျးထကျဝကျခနျ့ကိုပိတျရနျ ညှနျကွားထားရကွောငျး အစားအသောကျနှငျ့ဆေးဝါးကှပျကဲရေးဦးစီးဌာန(FDA)မှ သိရသညျ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးရှိရသေနျ့လုပျငနျးမြားကို တဈလတဈကွိမျစဈဆေးရာတှငျ ယခုကဲ့သို့တှရှေိ့ခွငျး ဖွဈသညျ။“စဈဆေးမှုကတဈလကိုတဈကွိမျလုပျပါတယျ။ စံခြိနျစံညှနျးနဲ့ကိုကျညီအောငျထုတျလုပျမှုမရှိတဲ့လုပျငနျးတှကေို ပိတျသိမျးဖို့ကိုညှနျကွားပါတယျ။ ဒီလိုစဈဆေးရာမှာလိုငျစငျရအနနေဲ့ပွောရရငျ လိုငျစငျရထားပွီးသားအားလုံးရဲ့ ထကျဝကျခနျ့ကိုပိတျဖို့ညှနျကွားနရေပါတယျ။”ဟု အစားအသောကျနှငျ့ဆေးဝါးကှပျကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ရနျကုနျဌာနခှဲမှညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာမငျးဝံက ပွောသညျ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတှငျ လိုငျစငျရရသေနျ့လုပျငနျးမှာ (၃၀၀)မှ (၅၀၀)ကွားရှိကွောငျး သိရသညျ။အစားအသောကျနှငျ့ဆေးဝါးကှပျကဲမှုဦးစီးဌာန (FDA)အနဖွေငျ့ ရသေနျ့လုပျငနျးမြားအား ဓာတျခှဲစဈဆေးရာတှငျ အခြိနျကာလအပိုငျးအခွားအရကွာမွငျ့ကွောငျး ပွညျထောငျစုစာရငျးစဈခြုပျ အစီရငျခံစာအရသိရသညျ။
စိန်ခေါ်သူနဲ့ ထိုးဖို့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီး ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်
ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့မှပြိုင်ဘက်ဟောင်းနဲ့ ချန်ပီယံလုပွဲ ဆင်နွှဲတော့မယ့် မြန်မာ့စပါးအုံး အောင်လအန်ဆန်း
ThuTaSone provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://thutasone.net/ (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.
ဒူးနာရောဂါ လက်တွေ့ပျောက်တဲ့ ဆေးနည်းပေါင်းချုပ်
ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၆၀၀၀ ကျော်လှူခဲ့ပြီး တစ်ရွာလုံး မီးခိုးတိတ် ၁၀ ရက်တိတိ ဘူဖေးကျွေးခဲ့တဲ့ မြန်မာ့သူဌေးကြီး